अल्ट्रासोनिक्समा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
तल तपाईले अल्ट्रासोनिक सम्बन्ध सम्बन्धी सबै भन्दा सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो प्रश्नको जवाफ फेला पार्नुभएन भने, कृपया हामीलाई सोध्न संकोच नगर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी हुनेछौं।
के म सल्वेट्सको छोराछोरी जन्माउन सक्छु?
मलाई कति अल्ट्रासोनिक पावर चाहिन्छ?
के अल्ट्रासाउन्डले मानिसहरूलाई असर गर्छ? मैले अल्ट्रासोनिक प्रयोग गरेर कस्ता सावधानीहरू लिनु पर्छ?
चुम्बकोस्ट्रेक्टिभ र पाइइजाइलेक्ट्रिक ट्राभेन्डरहरूबीच के फरक छ?
नमूना sonication को समयमा किन गर्मी हुन्छ?
के नमूनाहरूलाई बेवास्ता गर्न सामान्य सिफारिसहरू छन्?
क्या Hielscher प्रतिस्थापनable sonotrode युक्तिहरु प्रस्ताव?
प्रश्न: के म सल्वेट्सको छोराछोरीलाई बेवास्ता गर्न सक्छु?
सैद्धान्तिक रूप से ज्वलनशील सल्वेट्स sonication द्वारा अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ज्वलनशील या विस्फोटक अस्थायी पहियों cavitation द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यस कारणको लागि तपाईंले अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू र सहायक उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन यस प्रकारको अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोगको लागि उपयुक्त छ। यदि तपाइँ सल्टेन्टहरूलाई ध्वनिको आवश्यकता पर्दछ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस, त्यसैले हामी उपयुक्त उपायहरू सिफारिस गर्न सक्छौं।
प्रश्न: मलाई अत्याधिक अल्ट्रासोनिक पावर चाहिन्छ?
आवश्यक अल्ट्रासोनिक पावर चाहिन्छ धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ, जस्तै:
कुल आवाज प्रशोधन गर्न
कुल आवाज प्रशोधन गर्ने समय
सामग्री पुर्याउन सकिन्छ
अल्ट्रासोनिक उपचार पछि इरादा प्रक्रिया परिणाम
सामान्यमा ठूलो मात्रामा उच्च शक्ति (वाट्याट) वा अधिक sonication समय चाहिन्छ। अधिकांश सोनोट्रोड प्रकारका लागि, मुख्यतया टिप सतहमा शक्ति वितरित गरिन्छ। यसैले, सानो व्यास जांचहरू बढी ध्यान केन्द्रित cavitation क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ। एक उच्च अल्ट्रासोनिक तीव्रता (प्रति भोल्युममा प्रतिव्यक्ति) सामान्यतया उच्च प्रोसेसिंग दक्षताको परिणाम हुनेछ।
क: अल्ट्रासाउन्डले मानिसलाई असर गर्छ? मैले अल्ट्रासोनिक प्रयोग गरेर कस्ता सावधानीहरू लिनु पर्छ?
अल्ट्रासोनिक आवृत्तिहरू मानवहरूको श्रव्य दायरा भन्दा माथि छन्। अल्ट्रासोनिक कंपन युगल धेरै राम्रो तरिकाले ठोस र तरल पदार्थ मा छ जहाँ उनि अल्ट्रासोनिक उत्पन्न गर्न सक्छन् cavitation। यस कारणले तपाईलाई अल्ट्रासोनिक रूपमा भागहरू भाग्न वा हानिकारक तरलहरूमा पुग्न छुनु हुँदैन। अल्ट्रासोनिक लहरहरु को हवाई पारेषण मानव शरीर मा कुनै दस्तावेज नकारात्मक असर नहीं, किनकि ट्रांसमिशन स्तर धेरै कम छ।
जब sonication तरल पदार्थ cavitation बुलबुले को पतन एक स्पीचिंग शोर उत्पन्न गर्दछ। शोरको स्तरले धेरै कारकहरू जस्तै शक्ति, दबाब र आयाममा निर्भर गर्दछ। त्यस उप-हार्मोनिक (कम फ्रिक्वेन्सी) आवृत्ति आवाज उत्पन्न गर्न सकिन्छ। यो श्रव्य शोर र यसको प्रभाव अन्य मिसिनहरु जस्तै तुलना, इन्जिन, पंप वा ब्लेलरहरू हुन्। यस कारणका लागि हामी लामो समयको लागि अपरेटिङ सिस्टमको नजिक हुँदा उचित कान-प्लगको प्रयोग सिफारिस गर्छौं। वैकल्पिक रूपमा, हामी हाम्रो लागि उपयुक्त ध्वनि सुरक्षा बक्सहरू प्रस्ताव गर्दछौं अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू।
प्रश्न: चुम्बकोस्ट्रेक्टिभ र पाइइजाइलेक्ट्रिक ट्राभर्सिल्डरहरूबीच के फरक छ?
चुम्बकीयोस्ट्रेक्टिभ प्रोसेसरमा विद्युत उत्पादन एक उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जसले भाइब्रेट गर्न को लागी एक चुम्बकोस्ट्रेटरी सामग्री बनाउँछ। Piezoelectric transducers मा, बिजुली पावर सिधै लामो समय सम्म चलने वाला कंपनहरु मा परिवर्तित हुन्छ। यस कारणको लागि, पाइइजाइलेक्ट्रिक्रिक ट्राभर्सिल्डरहरूसँग उच्च छ रूपांतरण दक्षता। यसले बारीमा कूलिंग आवश्यकता घटाउँछ। आज, पियोजोइलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युडरहरू उद्योगमा प्रचलित छन्।
प्रश्न: नमूना sonication को समयमा किन गर्मी हुन्छ?
अल्ट्रासोनिकेशनलाई तरलमा शक्ति पठाउँछ। म्यानुअल थम्बनेलहरू, तरल भित्र पङ्क्ति र घर्षणको नेतृत्व गर्दछ। यस कारण अल्ट्रासोसनले प्रसोधनको बेलामा धेरै गर्मी उत्पन्न गर्छ। गर्मी अप को कम गर्न प्रभावकारी शीतलन आवश्यक छ। सानो नमूनाका लागि, गर्मी वा चिसोपनको लागि बर्फ-स्नानमा भाइरस वा गिलास बियरलाई राखिनुपर्छ।
तपाईंको नमूनाहरूमा उच्च तापमानको सम्भावित नकारात्मक प्रभावको बावजूद, ऊतकको रूपमा, cavitation प्रभावशीलता उच्च तापमान मा कम हुन्छ।
प्रश्न: के नमूनाहरूलाई बेवास्ता गर्न सामान्य सिफारिसहरू छन्?
साना भाँडाहरू अल्ट्रासोनिक उपचारको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ, किनकि तीव्रता वितरण ठूलो बिकारीहरूको भन्दा धेरै भन्दा बढी छ। सोनोट्रोड फोमबाट बचाउन को लागी तरलमा निकै गहिराइमा खसेको हुनुपर्छ। धेरै ऊतक ऊर्ध्वाधर, जमीन वा pulverized हुनु पर्छ (उदाहरणार्थ तरल नाइट्रोजन मा) sonication भन्दा पहिले। अल्ट्रासोनिकेशन को समयमा फ्री कडिक्स्डहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ जुन सामग्रीसँग प्रतिक्रिया हुन सक्दछ। तरल नाइट्रोजनको साथ तरल पदार्थ समाधान समाधान गर्न वा स्वाभर्सरहरू जस्तै डथिथ्रोरेइटोल, मिडियामा सिस्टिन वा अन्य -एच यौगिकहरू, ऑक्सीकरण मुक्त कणको कारणले क्षति घटाउन सक्छ।
Sonication प्रोटोकलहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ऊतक होमगेनलाइजेसन & lysis, कण उपचार र हानिकारक अनुप्रयोगहरू।
प्रश्न: के Hielscher प्रतिस्थापनयोग्य sonotrode सुझावहरू प्रदान गर्दछ?
हेलस्क्राउले सोनोट्रोडको लागि प्रतिस्थापनयोग्य सुझावहरू प्रदान गर्दैन। कम-सतहको तनाव मस्तिष्क, जस्तै सव्वेन्ट सामान्यतया सोनोट्रोड र प्रतिस्थापन योग्य टिप बीचमा इन्फेसेसन घुसाउनुहोस्। यो समस्या थम्बनेल को आयाम संग बढ्छ। तरलले सूक्ष्म खण्डमा कणुलर लगाउन सक्छ। यो सोनोट्रोड देखि टिप को अलगाव को लागी थ्रेड मा पहनना गर्दछ। यदि टिप अलग छ भने यो अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सीमा गुनगुनाउने छैन र यन्त्र असफल हुनेछ। यसैले हेल्सेचर मात्र ठोस परीक्षणहरू मात्र, मात्र।
तपाईंका प्रश्नहरू पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक जेनरेटर (बिजुली आपूर्ति) अल्ट्रासोनिक आवृत्ति को विद्युत ओसीलोशन (श्रव्य आवृत्ति माथि, जस्तै 19केजीएच) उत्पन्न गर्दछ। यो ऊर्जा सोनोट्रोडमा पठाइएको छ।
सोनोट्रोड / जांच
सोनोटरोड (पनि जांच या सींगको रूपमा उल्लेख गरिएको) एक यांत्रिक घटक हो, जसले ट्रांजेडेररबाट अल्ट्रासोनिक कम्पनलाई सन्तुष्टि पुर्याउँछ। घर्षण र हानिबाट बच्न यो साँच्चै बलियो माउन्ट गरिएको छ। सोनोट्रोड ज्यामितिको आधारमा, मेनेनिकल कम्पनले छायांकन वा कम हुन्छ। सोनोट्रोडे सतहमा, यांत्रिक कम्पन युगलहरू तरल हुन्छन्। यसले माइक्रोस्कोपिक बुलबुले (cavities) को गठनमा नतिजा गर्छ जुन कम दबाव चक्रको समयमा विस्तार गर्दछ र उच्च रक्तचाप चक्रको समयमा उल्लङ्घन गर्दछ। यो घटनाले cavitation लाई निषेध गरिएको छ। cavitation सोनोट्रोड टिप मा उच्च कतरनी बल उत्पन्न गर्दछ र उजागर सामाग्री को तीव्र उत्तेजित हुन को कारण बनता छ।
अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर (कनवर्टर) इलेक्ट्रोनिक मेनेनिकल घटक हो, जसले विद्युतीय थम्बनेलहरूलाई विद्युतीय कम्पनमा बदल्छ। विद्युत थम्बनेल जनरेटर द्वारा उत्पन्न हुन्छ। मेनुअल कम्पन सोनोट्रोडमा पठाइन्छ।
कम्पनको आयामले सोनोट्रोडको टिपमा थरथरानको परिमाणको वर्णन गर्छ। यो सामान्यतया पीक-शिखर मापन गरिन्छ। यो अधिकतममा सोनोट्रोड टिप स्थिति बीचको दूरी हो। विस्तार र अधिकतम। सोनोट्रोड को संकुचन। सामान्य सोनाट्रोडे एम्पलीवुड 20 देखि 250 सेमिमिटर सम्म हुन्छ।